Chikonzero chakanaka nei Tourism kuUAE iri kukwikwidza kukuru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Chikonzero chakanaka nei Tourism kuUAE iri kukwikwidza kukuru
Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa UAE Nhau • Investments • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
VaIsrael vachakwanisa kujoina vagari vedzimwe nyika sevashanyi muUnited Arab Emirates mushure mekunge magwaro apedzwa zvichitevera chiziviso chakaitika cheChina chechinyakare chehukama pakati penyika mbiri idzi.
Dzakananga nendege kuenda kuDubai kuburikidza neSaudi airspace dziri mumabasa, Mutungamiriri weIsrael, Binyamin Netanyahu akadaro Muvhuro panguva yekushanya kuBen-Gurion Airport.
UAE-based vashanyi vanobvunzurudzwa neMedia Line vanoti nyika yavo yaita basa rakanaka kubata chirwere checoronavirus uye yakagadzirira kugamuchira vashanyi vekunze zvakare.
Rekodhi vashanyi vanosvika mamirioni 16.74 vakashanyira Dubai gore rapfuura, sekureva kweDhipatimendi reKushanya neKushambadzira. IUAE yakanga ichitarisira yakatokura nhamba gore rino senyika inotambira Expo 2020, asi denda rakasundira kuvhura kubva muna Gumiguru kusvika Gumiguru 2021.
Dubai Airport yakavhurwazve kune vafambi vekunze muna Chikunguru 7, uye inopfuura mwedzi gare gare, General Directorate yeResidency neZvekune dzimwe nyika kuDubai inoti kwave nekuwedzera kukuru kune vafambi.
Iyo UAE ine emirates manomwe - Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah uye Umm Al Quwain.
"Vakaita basa rakanaka chose nemazano akasiyana ema emirates," anodaro Nigel David, director director wedunhu neLondon-based World Travel & Tourism Council, ane mabasa anosanganisira Middle East.
Vakaita basa rakanaka chose nemazano akasiyana ema emirates akasiyana
"KuRas Al Khaimah, kune kutarisisa kuri kuwedzera pakushanya kwekushanya, pamwe nekusimudzira mumakomo," akadaro The Media Line. “Une Dubai ine donzvo rekutenga, asiwo mahombekombe uye zvese zvinokwezva zvine Dubai. Uye zvino wawana Abu Dhabi munzira, neawa imwe uchienda, uine tarisiro patsika. Une tsika dzakanaka ipapo. ”
Denga raAud Dhabi. (Kutendeseka Orient Tours UAE)
Mwaka wadarika, sekureva kwekanzuru, chikamu chekufamba uye chekushanya chakapa 11.9% kuhupfumi hwese hweUAE. Inoshandisa vanhu vanopfuura 745,000, nevashanyi vachishandisa 141.1 bhiriyoni dirhams, kana vangangoita $ 38.5 mamirioni. Nhamba huru kwazvo dzevashanyi dzakabva kuIndia, Saudi Arabia, United Kingdom, China neOman.
Zeeshan Muhammad, maneja maneja wemuno mushanyi Daytur Dubai, akarumbidza mhinduro yehurumende kurukato rwekorona.
"Hurumende iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekuchengetedza vagari vemo [uye] nevanhu vari kubva kunze," Muhammad akaudza The Media Line.
Kubva neChipiri, vanhu makumi matanhatu nemazana matanhatu nemana makumi mana nevaviri muUAE vaive vatapukirwa necoronavirus. Pane ava, mazana matatu nemakumi mana nevatanhatu vakafa uye 64,541 364 vapora, sekureva kwaJohn Hopkins coronavirus tracker.
Pfungwa dzevashanyi vekutanga-nguva ndeye Abu Dhabi neDubai yemazuva ano, kusanganisira yekupedzisira Burj Khalifa skyscraper, chivakwa chakareba kwazvo pasi pakureba kwemamita 829.8 (2,722 tsoka).
Iyo UAE yakazivisa rusununguko kubva kuBritain muna 1971, iine matanhatu evanomwe emirates vakabva vatanga kuumba mubatanidzwa, uye Ras Al Khaimah vachipinda gore rinotevera.
Daytur's Muhammad anoti nezveDubai: "Muguta rino, iro rakashandurwa zvachose kubva mugwenga kuenda kuguta razvino, pane zvinhu zvakawanda izvo vanhu vanogona kusangana nazvo."
Denga redenga. (Kutendeseka Orient Tours UAE)
Anobvisa zvimwe zvinokwezva zvevashanyi zvaakakurudzira, kusanganisira kushanya kuGlobal Village chivaraidzo uye paki yetsika, jeep kutasva matunduru erenje, chirairo chevaBedouin pasi penyeredzi kana kudya kwemanheru pachikepe chetsika chehuni, chinonzi dhow.
Tora rwendo. (Kutendeseka Daytur Dubai)
Shan Mehda, maneja mukuru weSharjah-based Orient Tours UAE, akawedzera zvimwe zvezvisarudzo zvake pachirongwa: iyo hombe Dubai Dhizaini, ine panoramic maonero emaguta ekare uye matsva; inofamba ichitevedza mahombekombe eDhailand Creek; uye kunakidzwa neyepasi yakareba kupfuura yose zip zip line, kubva kuDubai Marina kuenda kuDubai Marina Mall.
Iyo Dubai Dhizaini (Yakavimbika Daytur Dubai)
Izvo zvinodikanwa kune vashanyi veDubai, Mehda inotaurira The Media Line, ndiyo yakareba kupfuura yose pasi rose yekucherechedza vhiri reFerris, Ain Dubai, iri 210 metres (689 tsoka) kumusoro. Ain Dubai ichangobva kuvhurwa pane yakagadzirwa nevanhu Bluewaters Island.
Mehda naMuhammad vese vanoti iyo Sheikh Zared Grand Mosque muAud Dhabi zvakare inofanirwa-kuona. Ndiwo mosque mukuru weUAE, uye wechitatu pakukura pasirese.
Mehda inokurudzirawo makomo eFujairah neRas Al Khaimah, kuchamhembe kwenyika, kuitira zviitiko zvekunze zvakaita sekukwira uye kuchovha bhasikoro. Gungwa rekumabvazuva reFujairah inogara kumakomo ane madziva akavanzika, uko vashanyi vanogona kutora dip.
"Wese munhu kubva kumushanyi anotakura zvinhu kuenda kumabhirionari ane ndege yake yega anogona kunakidzwa nenzvimbo iyi," akadaro.
Source: Iyo MediaLine | NaJoshua Robbin Marks